Duulimaadyo cusub oo ka yimid Ontaariyo kuna sii jeeday Austin oo ku socday Southwest Airlines
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyo cusub oo ka yimid Ontaariyo kuna sii jeeday Austin oo ku socday Southwest Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Ku -dhawaaqidda duullimaadyada cusub ee Koonfur -galbeed waxay imaanaysaa iyadoo ONT ay sii waddo soo -kabashada masiibada ee cajiibka ah. Bishii Ogosto, ONT waxay sheegtay in taraafikada rakaabku ay ku jirtay 7% heerarkii ka horreeyay COVID.
Diyaaradda Southwest Airlines ayaa ku dhawaaqday duulimaadyo cusub oo ka bilaaban doona Garoonka Caalamiga ah ee Ontaariyo kuna sii jeedda Austin, Texas.
Southwest Airlines waxay bixin doontaa maalin kasta Ontaariyo, Kaliforniya ilaa Austin, Texas duullimaadyo bilaabmaya Maarso 10, 2022.
Ku -dhawaaqidda Koonfur -galbeed waa war lagu soo dhoweynayo albaabka Koonfurta California iyo Boqortooyada Gudaha.
Ku dhawaaqista ka timid Southwest Airlines ee ah in diyaaradda qaaliga ah ay maalin walba si aan joogsi lahayn uga duuli doonto Madaarka Caalamiga ah ee Ontaariyo (ONT) kuna sii jeedo Austin (AUS) laga bilaabo Maarso 2022 waa war lagu soo dhoweynayo albaabka Koonfurta California iyo Boqortooyada Gudaha.
Southwest Airlines wuxuu bixin doonaa duulimaadyo u dhexeeya ONT iyo Madaarka Caalamiga ah ee Austin-Bergstrom maalin kasta jadwalka soo socda oo dhaqan galaya Maarso 10, 2022.
Flt # Asalka Goob departure imaanshaha Frequency Dayuurad
1204 ONT aus 10: 55 am 3: 35 wakhti dambe Isniin - Jimce &
474 ONT aus 9: 50 am 2: 30 wakhti dambe Sat 737-700
1739 aus ONT 4: 35 wakhti dambe 5: 55 wakhti dambe Isniin - Jimce &
257 aus ONT 2: 55 wakhti dambe 4: 10 wakhti dambe Sat 737-700
Duulimaadyada cusub ayaa diyaar u ah in si degdeg ah loo qabsado
Ku -darka caasimadda gobolka Texas ee khariidadda waddadayadu waa war la soo dhoweeyey iyo tilmaamid dheeraad ah oo lagu kalsoonaan karo oo ay samaysay shirkadda ONT ee ugu weyn diyaaradaha, ”ayuu yiri Alan D. Wapner, Madaxweynaha Guddiga Guddiga OIAA. "Sidoo kale waa astaan ​​kale oo muujineysa in ka soo kabashada ONT ee masiibada COVID-19 ay si wanaagsan u socoto oo ay dardar gelineyso."
Madaarka Caalamiga ah ee Ontaariyo (ONT) waa gegida dayuuradaha ee ugu koritaanka badan Maraykanka, sida uu qabo Global Traveler, oo ah daabacaad hormuud u ah duulimaadyada soo noqnoqda. Waxay ku taal Boqortooyada Gudaha, ONT waa qiyaastii 35 mayl bariga magaalada Los Angeles ee badhtamaha Koonfurta California. Waa garoon diyaaradeed oo adeeg buuxa leh kaas oo, ka hor masiibada coronavirus, u fidisay adeeg diyaarad ganacsi oo aan joogsi lahayn 26 garoomo diyaaradeed oo waaweyn oo ku yaal Mareykanka, Mexico iyo Taiwan.
Shirkadda Southwest Airlines Co., oo sida caadiga ah loogu yeero Koonfur-galbeed, waa mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu waaweyn Mareykanka iyo shirkadda ugu weyn ee duulimaadyada qaaliga ah ee adduunka ugu jaban. Waxay xaruntiisu tahay Dallas, Texas waxayna u qorsheysay adeeg 121 goobood oo Mareykanka ah iyo toban dal oo dheeri ah.